अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेट शिपिंग कम्पनी - Flydis
अनुभवी रसद पेशेवरहरुलाई तपाईंको कार्गो ह्याण्डल गर्न दिनुहोस्.
हाम्रो ह्यान्ड्स अफ एफसीएल शिपिंग र एलसीएल शिपमेन्ट सेवाको साथ, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो उत्पादनहरू एफबीए वेयरहाउस वा विश्वव्यापी कहीं पनि पठाउन सक्नुहुन्छ
कुरियर र एयर सेवा
यूपीएस कुरियर प्रयोग गर्नुहोस्, DHL कुरियर, फेडेक्स कुरियर र TNT कूरियर सेवा र एयर फ्रेट विश्वव्यापी रूपमा तपाइँको उत्पादनहरू एफबीए गोदाममा पठाउन.
बारकोड र लेबल सेवा
योग्य उत्पादनहरूको लागि जुन अमेजन बारकोड आवश्यक पर्दछ, अमेजन द्वारा पूर्तिले तपाइँको लागि प्रति-वस्तु शुल्कको लागि ती बारकोडहरू लागू गर्न सक्दछ. हामी तपाइँलाई केहि पैसा बचत गर्छौं!
एफबीए उत्पाद फोटोग्राफी
हामी तपाईंलाई सादा सेतो पृष्ठभूमिमा अमेजन-स्वीकृत फोटो प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं
अमेजन द्वारा पूरा
अमेजन एफबीए अमेजनका तीन प्रमुख व्यवसायहरू मध्ये एक हो.
हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाईले धेरै पाउनुहुन्छ र तपाईको सबै गोदाम आवश्यकताहरू पूरा गर्न तपाईको ठाउँ अधिकतम पार्नुहुन्छ
अन्तर्राष्ट्रिय दिग्गज: चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कुरियरहरू हुन्: DHL, UPS, TNT, फेडेक्स
ध्यानपूर्वक उत्पादन वस्तुहरूको निरीक्षण परीक्षण! हामी तपाईको उत्पादनहरु मध्ये प्रत्येकको परीक्षण गर्नेछौं यो सुनिश्चित गर्न कि तिनीहरू राम्रो अवस्थामा छन् अमेजनमा पुग्नु भन्दा पहिले
हामी कसरी मद्दत गर्दछौं?
हामी तपाइँको अमेजन सोर्सिंग को सुचारु
र चीन बाट शिपिंग प्रक्रिया.
तपाईंको सूची छान्नुहोस्
हामी तपाईंको आपूर्तिकर्ताओंबाट तपाईंको सूची नि: शुल्क लिन्छौं यदि तिनीहरू शेन्जेन वा डोंगगुआनमा छन् भने, वा तपाइँका आपूर्तिकर्ताओंले हामीलाई सिधा पठाइदिएका छन् यदि तिनीहरू अन्य क्षेत्रमा छन् भने.
तयारी र लेबलिंग
हामी तपाईंलाई अमेजनका आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि तपाईंको उत्पादनहरू तयारी गर्न प्रत्येक चीज प्रदान गर्दछौं. सेवाहरूले लेबलि include समावेश गर्दछ, पाली झोला, बन्डलिंग, repacking, वा आवश्यकताको आधारमा अरू केहि.
हामी तपाईंको सूची DHL द्वारा अमेजन गोदाममा पठाउँदछौं, UPS, हावा, ट्रेन वा सागर द्वारा तपाईंको आवश्यकता अनुसार. हामी कस्टम क्लीयरन्स सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया लिन्छौं, करहरू.
व्यावसायिक यातायात टीम
व्यावसायिक यातायात सेवाहरू, गुणस्तर निरीक्षण सेवाहरू गोदाम सेवाहरू, आदि.
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई चीनबाट अन्य देशहरूमा पठाइएका सामानहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछौं
11 शिपिंग को वर्ष
हामी अलीबाबाको सुन प्रमाणीकरण कम्पनी हो. केवल एक मजबूत कम्पनीसँग यो योग्यता छ. हामी संग छ 11 शिपिंग अनुभव को वर्षहरु, र शिपिंग गन्तव्य कहीं पनि हुन सक्छ, जस्तै तपाईंको घर वा अमेजन गोदाम.
सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्
हामी तपाईंको आपूर्तिकर्तासँग कुराकानी गर्नेछौं तपाईंको उत्पादनलाई हाम्रो गोदाममा सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्न, र त्यसपछि DAP वा DDP वा अन्य विधिहरू प्रयोग गरी ग्राहकको आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट गन्तव्यमा उत्पादन पठाउन.
हामी व्यावसायिक गुणस्तर निरीक्षण सेवाहरू प्रदान गर्दछौं, धेरै ग्राहकहरु प्रयोग गर्दैछन्. कारखाना प्राय: ध्यानपूर्वक सबै उत्पादनहरू जाँच गर्दैनन्, जसले उत्पाद बिक्री पछि खराब मूल्या to्कन गर्न सक्छ. हामी उत्पादनको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न ग्राहकको आवश्यकता अनुसार सावधानीपूर्वक जाँच गर्नेछौं.
अधिक छुट र
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हाम्रो मूल्यले ग्राहकहरूलाई धेरै छुट दिन्छ, हाम्रो यातायात हाम्रो ग्राहकहरु को लागी जिम्मेवार छ.
DDP हवा उडान - चीन प्रत्यक्ष उडान
DDP एयर उडान - ह Hongक Kong प्रत्यक्ष उडान
DDP समुद्री यातायात-शंघाई पोर्ट
समुद्री यातायात क्याबिनेट
DHL / यूपीएस एक्सप्रेस शिपिंग
FEDEX एक्सप्रेस यातायात
TNT एक्सप्रेस यातायात
EMS एक्सप्रेस यातायात
किन हाम्रो ग्राहकहरु हामीलाई प्रेम？
के कुराले हामीलाई बजारमा अरूबाट टाढा राख्छ
चीन मा तपाइँको आपूर्तिकर्ताहरु को प्रबन्धन को लागी धेरै समय लाग्छ. हामीलाई तपाईंको प्रेप र लजिस्टिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग द्वारा, तपाईंले अधिक समय बचत गर्नुभयो जुन तपाईंको ग्राहक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, बजार, र बिक्री.
हामीलाई थाहा छ कि तपाईंसँग अरूको तुलनामा फरक आवश्यकताहरू छन् - त्यसो भए, हामीसँग एक प्रणाली छ जुन तपाइँले प्रयोग गर्नुहुने सेवाहरूको लागि मात्र भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईलाई चाहिएको केहि चीज नदेखाउनुहोस्? केवल हाम्रो टीमलाई बताउनुहोस् र हामी तपाईंको लागि एक समाधान क्रमबद्ध गर्नेछौं!.
हामीलाई थाहा छ कि तपाईले आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा वा अरू कसैले यसलाई चोर्नबाट बचाउन जरुरी छ. हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंको गोप्यता हामीसँग सुरक्षित छ किनकि हामी तपाईंको प्रोप र शिपिंग प्रक्रिया मार्फत तपाईंको उत्पादको विवेक राख्छौं.
हामी तपाईका सामानहरू समय र सुरक्षित रूपमा आउँछन् भनेर निश्चित गर्न हामी भरपर्दो साझेदारहरूसँग काम गर्दछौं